အချို့လူတွေမှာ ဘာကြောင့် ခြင် ပိုကိုက်ခံရတာလဲ? - Amawpyay
အချို့လူတွေမှာ ဘာကြောင့် ခြင် ပိုကိုက်ခံရတာလဲ?
အချို့ လူများ သည် အိမ် အပြင် ထွက်သည် နှင့် ခြင်ကိုက် ခံရလေ့ ရှိပြီး အချို့တွင် ခြင် တောထဲ သွားနေ သော်လည်း ခြင် တစ်ကောင် မျှ အကိုက်
မခံ ရပေ ။ ခြင် များသည် သွေးနံ့ကို မိုင်ပေါင်း များစွာ ကပင်
အနံ့ ရသော်လည်း သွေးနံ့ကို မူတည် ၍ ကိုက် ရ မည့် အရာကို ရွေး ချယ် လေ့ မရှိ ။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ် လျက်ရှိသည့်
ပစ်မှတ် ကိုသာ ရွေးကိုက် လေ့ ရှိ သည် ။
လူတို့ သည် အောက်စီဂျင် ကို ရှူသွင်း ပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ကို ရှူ ထုတ် သည် ။ ထို့ ကြောင့် ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လုပ်မှု ပိုများသူ များကို ခြင် များက အဓိက ပစ်မှတ်ထား တတ် သည် ။
ဝဖြိုးသူ များနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများသည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ပို ထုတ် လွှတ်သောကြောင့် ခြင် ပိုကိုက်ခံ ရလေ့ ရှိသည် ။
အရေပြား ပေါ်တွင် ခြင် လာရောက် နားခို သော် လည်း အရေပြား အထူ အပါး ကို လိုက် ၍ ခြင် များ က ကိုက်သင့် / မကိုက်သင့် ဆုံးဖြတ် ကြသည် ။
အမျိုးသမီး များသည် အရေပြား ပိုပါးသော ကြောင့် ခြင် ကိုက်ခံရ ရန် ပိုမို လွယ်ကူသည် ။ အရေပြား ပိုပါးသည့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း များသည်လည်း ခြင် ပိုကိုက်ခံ ရတတ်သည် ။
သွေးအုပ်စု များစွာ ရှိသည့် အနက် ‘ O ’ သွေး အုပ်စုရှင် များကို ခြင် ပိုကိုက်လေ့ ရှိသည် ။ခြင်၏ နှာမောင်းကို ဖြတ်တောက် ပြီး သွေးအုပ်စု များစွာ
ပါဝင်သည့် လူများ ထံ ပျံသန်း စေရာ ခြင် များသည် ‘ O ’ သွေး အုပ်စုရှင်များ
ထံ၌ သာ နားသည်ကို တွေ့ရ သည် ။ ခြင်များ သည် အချိုကို လည်း ကြိုက် တတ် သည် ။ အချို့ လူများ၏ အရေပြားတွင် အချို ဓါတ်ဆောင် သည့် saccharide ဓါတ် များ ရှိသောကြောင့် ခြင် ပို ကိုက်ခံ ရ တတ် သည် ။
Credit : Health Updates Journal
အခြို့လူတှမှော ဘာကွောငျ့ ခွငျ ပိုကိုကျခံရတာလဲ?
အခြို့ လူမြား သညျ အိမျ အပွငျ ထှကျသညျ နှငျ့ ခွငျကိုကျ ခံရလေ့ ရှိပွီး အခြို့တှငျ ခွငျ တောထဲ သှားနေ သျောလညျး ခွငျ တဈကောငျ မြှ အကိုကျ
မခံ ရပေ ။ ခွငျ မြားသညျ သှေးနံ့ကို မိုငျပေါငျး မြားစှာ ကပငျ
အနံ့ ရသျောလညျး သှေးနံ့ကို မူတညျ ၍ ကိုကျ ရ မညျ့ အရာကို ရှေး ခယျြ လေ့ မရှိ ။ ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျ ဓါတျငှေ့ ထုတျလှတျ လကျြရှိသညျ့
ပဈမှတျ ကိုသာ ရှေးကိုကျ လေ့ ရှိ သညျ ။
လူတို့ သညျ အောကျစီဂငျြ ကို ရှူသှငျး ပွီး ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျ ကို ရှူ ထုတျ သညျ ။ ထို့ ကွောငျ့ ကာဗှနျဒိုငျ အောကျဆိုဒျ ထုတျလုပျမှု ပိုမြားသူ မြားကို ခွငျ မြားက အဓိက ပဈမှတျထား တတျ သညျ ။
ဝဖွိုးသူ မြားနှငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျ အမြိုးသမီးမြားသညျ ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျ ပို ထုတျ လှတျသောကွောငျ့ ခွငျ ပိုကိုကျခံ ရလေ့ ရှိသညျ ။
အရပွေား ပျေါတှငျ ခွငျ လာရောကျ နားခို သျော လညျး အရပွေား အထူ အပါး ကို လိုကျ ၍ ခွငျ မြား က ကိုကျသငျ့ / မကိုကျသငျ့ ဆုံးဖွတျ ကွသညျ ။
အမြိုးသမီး မြားသညျ အရပွေား ပိုပါးသော ကွောငျ့ ခွငျ ကိုကျခံရ ရနျ ပိုမို လှယျကူသညျ ။ အရပွေား ပိုပါးသညျ့ ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျး မြားသညျလညျး ခွငျ ပိုကိုကျခံ ရတတျသညျ ။
သှေးအုပျစု မြားစှာ ရှိသညျ့ အနကျ ‘ O ’ သှေး အုပျစုရှငျ မြားကို ခွငျ ပိုကိုကျလေ့ ရှိသညျ ။ခွငျ၏ နှာမောငျးကို ဖွတျတောကျ ပွီး သှေးအုပျစု မြားစှာ
ပါဝငျသညျ့ လူမြား ထံ ပြံသနျး စရော ခွငျ မြားသညျ ‘ O ’ သှေး အုပျစုရှငျမြား
ထံ၌ သာ နားသညျကို တှရေ့ သညျ ။ ခွငျမြား သညျ အခြိုကို လညျး ကွိုကျ တတျ သညျ ။ အခြို့ လူမြား၏ အရပွေားတှငျ အခြို ဓါတျဆောငျ သညျ့ saccharide ဓါတျ မြား ရှိသောကွောငျ့ ခွငျ ပို ကိုကျခံ ရ တတျ သညျ ။
❝ စိတ်ကို ကျွဲထိန်းသလို ထိန်းပါ ❞(တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလေး)
❝ စိတ်ကို ကျွဲထိန်းသလို ထိန်းပါ ❞(တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလေး) တစ်ခါတော့ ..မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသ တစ်ခုသို့ ဆရာတော် တရားဟောကြွလေ၏။ ထိုဒေသတွင် မိုးများသည့် အတွက် တောင်ယာသမား အများစုသည် နွားအစား ကျွဲများဖြင့်သာ ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးကြရလေ၏။ ကျွဲများသည် သန်မာထွားကျိုင်းပြီး ချိုကြီးများ ကားနေ၏။ ဆရာတော်သည် .. ကျွဲကြီးများကို မြင်သောအခါ ထိုဒေသမှ ဒကာကြီးများကို ယခုကဲ့သို့ မေးကြည့်လေ၏။ “ဒကာကြီး .. ဒီလောက် သန်မာတဲ့ ကျွဲကြီးတွေက ဒကာကြီးတို့ကို ပြန်ပြီး ရန်မမူကြဘူးလား” “တစ်ခါတလေတော့ ရန်မူတယ် ဘုရား၊ တလောက ဟိုဘက်ရွာကေ တာင်သူတစ်ယောက် ကျွဲခတ် လိုက်တာ ဗိုက်ပေါက်ပြီး နေရာမှာတင် …
မှတ်ဉာဏ်ကောင်းချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? မှတ်ဉာဏ်ကောင်းချင်ရင် သင်္ဂါရဝ ဆိုတဲ့ ပုဏ္ဏားကြီးက ဘုရားကို ဗေဒင် ကျမ်းတွေ သင်ယူ ထားပေမယ့် မေ့ကုန်တယ် ပျောက်ကုန်တယ် ဘာကြောင့် ပါလဲ ဘုရား တဲ့။ မြတ်စွာဘုရားက ရှင်းရှင်းလေး ဥပမာ ပေးထား တာရှိ တယ်။ မိမိရုပ်သွင်ကို ဘာနဲ့ ကြည့်လဲ ရှေးတုန်းက မှန်မရှိလို့ရေခွက်ထဲရေထည့်ပြီး အရိပ်ပေါ် လာတာ ကို ကြည့်တယ်။ ဘာလို့ အရိပ် ထင်တာ လဲမေးလို့ ရှိရင် ရေဟာပကတိ ကြည်လင် နေလို့ပဲ။ ဒါကို ဘုရားက ဥပမာပေးထားတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကလေးကို ရေလို့ သဘောထားကြည့် (၁) အရောင်ဆိုး …
ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ မြန်မာပြန် မြန်မာလိုပဲ တင်ပါမယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တွေ့ အံ့သြလောက်အောင် အစွမ်းထက်လို့ ယုံကြည်စွာ ရှိခိုးကြ ပါရန်တိုက်တွန်းပါရစေ ၁.သောဘဂဝါ- ထို့မြတ်စွာ ဘုရားသည် ဣတိပိ-ဤသို့သော အကြောင်းကြောင့်လည်း အရဟံ-အရဟ မည်တော်မူ ပါပေ၏။ သောဘဂဝါ-ထိုမြတ်စွာ ဘုရားသည် အရဟံဝတ-လူ နတ်ဗြဟ္မာ သတ္တဝါ တို့၏ ပူဇော် အထူးကိုခံတော် မူထိုက်ပါ ပေစွတကား။ အရဟန္တံ-ပူဇော် အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာ ဘုရားကို သိရသာ-ဦးခေါင်းရတနာမြတ်အင်္ဂါဖြင့် အဟံ-တပည့်တော်သည် ဝန္ဒာမိ-ရိုသေမြတ် နိုးလက်အုပ် မိုး၍ ရှိခိုးပါ၏။ အရဟန္တံ-ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာ ဘုရားကို သရဏံ-ကိုးကွယ်ရာ ဟူ၍ ဂစ္ဆာမိ- ဆည်းကပ် …